Indawo engeyiyo iHodgkin's lymphoma Archives-US Ilungelo Lokwazi
Uvavanyo lomhlaza waseSt. Kulindelwe iindaba zokuhlala
ezaposwa ngomhla Februwari 3, 2020 by UCarey Gillam
Uvavanyo lomhlaza we-Roundup eSt. kufutshane.
Ijaji yenkundla yesekethe iSt. Louis City, u-Elizabeth Hogan wakhupha isaziso ngoMvulo emva kwemini, eguqula isikhokelo esinikwe abagwebi kunye noonondaba kwiveki ephelileyo ukuba mabacwangcise iingxelo zokuvula kwityala eliqala ngoLwesithathu. Abasasazi abalinde ukubonisa inkqubo yolingo olulindelweyo baxelelwa ukuba mabapakishe izixhobo zabo.
Ityala lase-St. Louis, elibizwa ngokuba yi-Wade v. Monsanto, ibandakanya abamangali abane, kubandakanya nomfazi omnye owabulawa ngumyeni wakhe ngenxa ye-non-Hodgkin lymphoma. Iingxelo zokuvula zazilindelwe ngoJan. Inkundla yathi ityala liza kuvulwa ngoFebruwari 24. Ngoku, lihlala ixesha elingenammiselo.
Abamangali kwityala lika-Wade batyhola ukuba bona okanye abo babathandayo bakhulisa i-non-Hodgkin lymphoma ngenxa yokuvezwa kweyeza likaMonsanto's glyphosate-based herbicides, kubandakanya neRoundup brand. Ngaphezulu kwabantu abangama-50,000 XNUMX benza izityholo ezifanayo nxamnye nenkampani, kwaye bangezelela ngelithi iMonsanto iyayazi imingcipheko kodwa yahluleka ukulumkisa abathengi bayo.
Izilingo ezininzi zikhutshiwe kwidokethi kwezi veki zigqithileyo njengoko iBayer, eyathenga iMonsanto kwi2018, isondele ekusonjululweni kwesimangalo. I-Bayer ijonge ukuhlawula phantse i-10 yezigidigidi zeedola ukuhlawula uninzi, ukuba ayingawo onke, amabango, ngokutsho kwemithombo ekufutshane nothethathethwano.
Kwiveki ephelileyo, ityala laseCalifornia Roundup elinesihloko esithi Caballero v. Monsanto yahlehliswa ngokusemthethweni emva ngaphezulu kweveki yemisebenzi yokukhetha ijaji kunye nokuhlala kwabagwebi abali-16. Imithombo esondele kwisimangalo ithi imiqathango yokuhlaliswa kwabantu ngoku kuvunyelwene ngayo eCaballero.
Imithombo ikwatsho ukuba abamangali kwityala leRoundup elicwangciselwe ukuqala nge-24 kaFebruwari kwinkundla yomanyano eSan Francisco - uStevick v. Monsanto-baxelelwa ukuba ityala labo akunakulindeleka ukuba liqhubeke.
Abatyalomali be-Bayer banomdla kwinkampani ukuba iphelise isimangalo kwaye ishiye izilingo ezininzi kunye noluntu oluziswa ngumntu ngamnye. Amagqwetha ka-Bayer axele ukuba kuxoxiswene ngentlawulo yokuhlawulwa kwabaxumi beenkampani ezininzi zabamangali, kodwa abakwazanga ukufikelela kwisivumelwano nababini - iMiller Firm yaseVirginia kunye neWeitz & Luxenberg yaseNew York.
Ifemu yaseMiller imele abamangali kumatyala eCaballero, eWade naseStevick. Inyani yokuba la matyala ngoku ayamiswa okanye ayacinywa ibonisa ukuba iBayer kunye ne-Miller ngokuqinileyo kungenzeka ukuba bafikelele kwisivumelwano, okanye bakufutshane nenye, batsho njalo.
Izilingo ezintathu zokuqala zahamba kakubi eMonsanto naseBayer njengamajaji anomsindo inikwe ngaphezulu kwebhiliyoni yeedola kumonakalo kubamangali abane. Iijaji zetyala ziye zathoba amabhaso amajaji ukuya kuthi ga kwi-190 yezigidi zeedola, kwaye bonke baphantsi kwesibheno.
Ingxelo zeReuters ukuba iBayer ithathela ingqalelo indawo yokuhlala enokuthintela amagqwetha abandakanyekayo kumangalelwano kwizimangalo kwintengiso yabathengi abatsha.
Umlamli uKen Feinberg walile ukuphawula. UFeinberg wonyulwa ngoMeyi ophelileyo nguMgwebi weSithili sase-US uVince Chhabria ukuququzelela inkqubo yokuhlala. Kwinyanga ephelileyo, uFeinberg wathi "wayenethemba lokulumka" ukuba "ukubanjwa kukazwelonke" kwamatyala aseMelika akufuphi.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umhlaza, EPA, ukutya, glyphosate, impilo, IMonsanto, i-lymphoma engeyiyo iHodgkin, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi